Big Cartel: Ecommerce yeVanyori | Martech Zone
Big Cartel: Ecommerce yeVanyori
Svondo, Ndira 26, 2014 Svondo, Ndira 26, 2014 Douglas Karr
Yakavambwa mu2005 kubatsira yavo-muvambi kutengesa zvigadzirwa zveboka rake, Big Cartel parizvino musha wevanopfuura mazana mana ezviuru vanozvimirira maartist pasi rese. Yadzo ecommerce chikuva yakanyatso kuvakwa kubatsira vanogadzira kuwana zvigadzirwa zvavo online. Heino vhidhiyo kubva kune mumwe wevatengi vavo, Rarama Upenyu Hurefu, mugadziri wezvipfeko.
Big Cartel inopa zvinotevera mabhenefiti uye maficha:
Kurumidza setup - Tora chitoro chiri nyore pamhepo mumaminitsi.
Nyore kushandisa - vanopa chikuva chakareruka chiri nyore kushandisa.
Bhizinesi pfungwa - kushuma uye kurongeka manejimendi.
Yakaiswa - Zvakareruka kune epamberi maitiro uye pasina kukodha kunodiwa. Vashandisi vanogona kusarudza pre-yakagadzirwa madingindira uye nyore nyore kugadzirisa iyo mifananidzo, mavara, uye mafonti.
Tsika dunhu - Shandisa chero dura rako raunaro kuti upe chitoro chako tsika URL
Tonga kurongekas - yekuraira manejimendi nzvimbo uye odha yekusimbisa maemail iwe aunokwanisa kugadzirisa.
Injini yekutsvaga yakagadziridzwa - zvitoro zvakagadzirirwa kutsvaga injini, zvichibva pane zvakakurudzirwa neGoogle.
Matanho uye analytics - tarisa chiitiko chechitoro uye kukura neicho chaicho-nguva dhibhodhi stats uye Google Analytics kusangana.
Makodhi ekuderedza - makodhi ekuderedzwa anopa nzira dzakasiyana siyana dzekutengesa zvigadzirwa zvitsva, kusimudzira chitoro chako, uye nekupa mubayiro vatengi vakavimbika.
Zvigadzirwa zvemadhora - tengesa hunyanzvi hwekudhijitari, mumhanzi, mavhidhiyo, mafonti, mapikicha, ma-eBooks, uye zvimwe zvigadzirwa zvinogoneka nehanzvadzi yedu-yakabatanidzwa, Chisimudziso.
Tengesa paFacebook - Wedzera chitoro chako kune chero peji reFacebook uye ubatanidze mafeni ako kune zvigadzirwa zvako kuburikidza neyedu isina musanganiswa-yakabatanidzwa Facebook app
Mobile Checkout - tengesa zvinhu zvako zvakananga kubva ku iPhone yako ne Big Cartel app.
Tags: hombe cartelchitoro chekutora padhijitariecommerceecommerce yevanyoripulleytengesa art onlinetengesa fashoni online
JustUnfollow: Manage, Tevera uye Tsvaga Twitter Vateveri